Nnwom 79 NA-TWI - Ɔmannyina mpaebɔ - O Onyankopɔn, - Bible Gateway
Nnwom 78Nnwom 80
Nnwom 79 Nkwa Asem (NA-TWI)
79 O Onyankopɔn, abosonsomfo akyɛ w’asase afa. Wɔagu wo fi kronkron no ho fi ama Yerusalem adan amamfo. 2 Wogyaw wo nkurɔfo amu maa apete; wo nkoa amu, wogyaw maa wuram mmoa sɛ wɔnwe. 3 Wohwiee wo nkurɔfo mogya gui sɛ nsu. Mogya hwie gui sɛ nsu wɔ Yerusalem na obi anka a obesie awufo no. 4 Aman a atwa yɛn ho ahyia no kasa tia yɛn; wɔserew yɛn, di yɛn ho fɛw.